सरकारी प्रतिबन्धले विप्लव माओवादीलाई शक्तिशाली बनाउला कि समाप्त ? « Dainiki
सरकारी प्रतिबन्धले विप्लव माओवादीलाई शक्तिशाली बनाउला कि समाप्त ?
२९, फागुन, काठमाडाैँ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको रणनीतिक योजना पछिल्लो पटक सफल भएको छ । विप्लवको चतुर्याईले मूलधार राजनीतिमा आफ्नो एजेन्डा ल्याई पुर्‍याएको छ । पार्टीभित्र चर्किदैं गएको दुई लाइन संघर्षलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय विप्लवलाई सब‌ै भन्दा फाइदा साबित हुने सिद्ध भइसकेको छ ।
पूर्व माओवादी समूहबाटै सरकारको निर्णयप्रति बढी असहमति प्रकट भएका छन् । यी असहमति अब, शहरिया बुद्धिजीवीहरूका मनमा पसे । जानि नजानि प्रतिपक्षहरू पनि त्यतै लहसिन्छन । आज बिहानदेखि बैधानिक रूपमा विप्लव माओवादीको एजेन्डा संचारमाध्यमा वहसको विषय बन्नेछ । वहसले सरकारको निर्णयप्रति नकारात्मकता र विप्लव माओवादीप्रति सकारात्मक सन्देश लैजानेतिर बढि केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
सरकारले निर्णय किन गर्यो ? त्यो उसको बाध्यता हो । राज्यको उपस्थिति देखाउनु थियो । शृखलाबद्ध बम विष्फोटबाट सर्वसाधारण, जनधनको क्षति भएको छ। यसलाई रोक्न नसकेको भनि सरकारको आलोचना पनि उत्तिकै छ । यसबीचमा विप्लव माओवादीभित्र यतिबेला मतभेद देखिए पनि बैचारिक पक्षमा त्यति छैन । बरू, जताततै चन्दा आतंकले पार्टी बदनाम हुँदै जाने विषय नै मतभेदको मुख्य विषय केन्द्रित हुँदै गयो । केही नेताहरूबीचको मतभेद पैसा कसले बढी जम्मा पार्ने भन्नेमै छ ।
एनसेलबाट पैसा लिने विषयमा मध्य कमान्डका ईन्चार्ज हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन र प्रकाण्डबीच लामै टकराव चल्यो। वैदेशिक रोजगार संघलाई चार महिनाअघि दिएको पत्र फिर्ता लिएपछि अध्यक्ष रोहन गुरुङ आफूलाई असुरक्षित महसु गरी आफ्नो नीजि गाडी चढ्न समेत छोडेका थिए । यि सबै प्रकरणले पार्टी न बँच्ने देखिएपछि विप्लवको प्रत्यक्ष कमाण्डमा बम विष्फोट गराइएको छ ।
सुदर्शनलाई कमान्ड दिइराखिएको छ । तर, अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना गरिदिएपछि उपत्यकाबाट बाहिरिनु परेको छ । जसले चन्दा आतंकको बदनामीबाट पार्टी पनि जोगिने, सरकार विरूद्ध कार्यकर्तालाई र नेतृत्व केन्द्रिकृत गराउने रणनीतिमा विप्लव सफल देखिएका छन् । यता सरकार विप्लव माओवादीभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोलाई चर्काएर कमजोर बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रतिबन्ध लगाएपछिको अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट विप्लव माओवादी शक्तिशाली बन्ने वा सकिने विषय विप्लवका भावि गतिविधि र सरकारको रबैयामा निर्भर देखिन्छ । (नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव उजीर मगरले सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणी)
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०७:२१
स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी जसले कालापानी चिनाए
-अनुजकुमार श्रेष्ठ कालापानीको मुद्दा पेचिलो बन्दैछ। आज कालापानीमा भारतीय सेनाले परेड खेल्दै गरेको घट्नाको बारेमा
१३ जेठ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कारण संविधान संशोधनको काम केही समय रोकिने भएको छ
स्वास्थ्य मन्त्री ढकालद्धारा सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग भिडियो कन्फ्रेन्सबाट छलफल
१३ जेठ, काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूसँग कोरोना
नुवाकाेटका कम्युनिष्ट नेता भण्डारीकाे निधनप्रति अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा दुख व्यक्त
१३ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नुवाकाेटका कम्युनिष्ट नेता
काठमाडाैँकाे गोकर्णेश्वर–४ का काेराेना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका सबैको नतिजा नेगेटिभ
कोरोनाको प्रभाव न्यून गर्न एसियाली विकास बैंकद्धारा नेपाललाई ३० अर्ब सहुलियत ऋण सहयाेग
स्वतन्त्र राष्ट्रलाई छोटे भाइ भनेर अपमानित गरिनु दुःखद् कुरा होः महासचिव पौडेल (अन्तर्वार्ता)
‘एकता र अखण्डता भाँड्ने नियतले पूर्वराजाको तस्बिर अंकित नोटमा प्रतबन्ध’